Nhau - "Svondo reNational Medical Dziviriro Yekusimudzira Svondo" Kutenga kwesainzi uye zvine musoro kwemidziyo yekurapa yemumba
Midziyo yekurapa inoreva zvishandiso, zvishandiso, zvishandiso, in vitro diagnostic reagents uye macalibrator, zvishandiso, uye zvimwe zvakafanana kana zvimwe zvinhu zvakabatana zvinoshandiswa zvakananga kana zvisina kunanga pamuviri wemunhu, kusanganisira inodiwa software yekombuta. Izvo zvinoshandiswa zvinonyanya kuwanikwa kuburikidza nenzira dzepanyama, kwete kuburikidza ne pharmacology, immunology, kana metabolism, kana kunyangwe nzira idzi dzichisanganisirwa asi dzinongotamba basa rekubatsira. Chinangwa ndiko kuongororwa, kudzivirira, kuongorora, kurapwa kana kurerutsa zvirwere; kuongororwa, kuongorora, kurapwa, kurerutsa kana kushanda muripo wekukuvara; kuongororwa, kutsiviwa, kugadziriswa kana kutsigirwa kwezvimiro zvemuviri kana maitiro ehupenyu; kutsigirwa kwehupenyu kana kuchengetedza; kubata pamuviri; Ipa ruzivo rwekurapa kana rwekuongorora zvinangwa nekuongorora masampuli kubva kumuviri wemunhu. Lanzhou Municipal Market Supervision Bureau inoyeuchidza vatengi kuti vanofanirwa kuteerera pfungwa dzavanachiremba vasati vatenga michina yekushandisa kumba uye voishandisa vachitungamirwa navanachiremba. Chimwe chezvinhu zvinotevera chinofanirwa kutariswa pakutenga zvigadzirwa zvekurapa kumba:
Vatengi vanotenga zvekushandisa zvekurapa zvemumba kumafamasi enguva dzose uye emabhizimusi emidziyo ekurapa ayo akawana "Medical Chigadzirwa Bhizinesi Rezinesi" uye "Yechipiri Kirasi Yekurapa Midziyo Bhizinesi Rekodhi Chitupa".
02 Wona chigadzirwa chinogamuchirwa
03 Wona mirairo
Vasati vatenga chigadzirwa chekurapa, vatengi vanofanirwa kuverenga zvakanyatsoita bhuku rezvigadzirwa, kujekesa mashandiro ezviito, chiyero chekushandisa, nzira yekushandisa, matanho ekuzvidzivirira, zvinopesana, nezvimwewo, uye voshandisa zvine musoro zvichienderana nezano rachiremba nemamiriro avo.
04 Kumbira invoice
Vatengi vanofanirwa kuwana ma invoice ekutenga kana vachitenga zvigadzirwa zvekurapa kuchengetedza kodzero dzavo.
05 Masiki ekurapa
Masiki ekurapa ndeechikamu chechipiri chemidziyo yekurapa, uye chitupa chekunyoresa mudziyo uye rezinesi rekugadzira rinofanira kuwanikwa, uye nhamba yekunyoresa uye rezinesi rekugadzira zvinofanirwa kuiswa pakapepa.